World info Post - Rangoon Times Daily News
World info Post
The author and local publisher Testing the new era of artistic freedom
By adminwipPosted on March 22, 2021
“Have you been to the national library?” asks San Mon Aung. The author and local publisher at WE publishing house […]
Men relax for the day, but …..
Toe Ywa isasmall beach village that can be reached by motorboat from Kawhmu Township through Lat Chan Khok […]
တရုတ်နိုင်ငံဟာ ဂျပန်နိုင်ငံသားများ ကို COVID-19 စစ်ရန် စအိုမှ Swab ယူနေသဖြင့် ဆက်မလုပ်ရန် ဂျပန်အစိုးရ တောင်းဆို
By adminwipPosted on March 3, 2021 March 3, 2021
တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသား တွေကို စအိုကနေ “Swab ယူပြီး COVID-19” စစ်ဆေးတာကို ဆက်မလုပ်ဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ယနေ့မှာတောင်းဆိုလိုက် ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က စစ်ဆေးမှု နည်းလမ်းပြောင်းပေးမယ်လို့ တုံ့ပြန်မှုမပြုလာသေးတဲ့အတွက် ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ တရုတ်ရဲ့စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းကိုပြောင်းပေးဖို့ ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေတို့နဲ့ ထပ်တိုး တရားစွဲ
By adminwipPosted on March 1, 2021 March 1, 2021
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက တရားစွဲဆိုထားသော အမှုပေါင်း ၄ မှုအထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “တစ်ခုကကျတော့ ဘာလဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ထုတ်ပြန်စာတွေ၊ ဘာတွေက နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်အောင် လှုံ့ဆော်တယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါက အတိုင်ပင်ခံရယ်၊ သမ္မတကြီးရယ်၊ ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရယ်ကို ၅၀၅(ခ)နဲ့ […]
အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာ
By adminwipPosted on February 28, 2021
အမေရိကန်ရေတပ်သားနှင့် ကမ်းတက်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅၀၀၀) ကျော်ပါဝင် သည့် USS Nimitz ဦးဆောင်သော တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ရေယာဉ် အုပ် ( Ni m i t z Carrier Strike Group – […]
ကော့ကရိတ် တွင် ကေအမ်မ်ယူ နှင့် တပ်မတော် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
By adminwipPosted on February 26, 2021
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တောင်ဘက် ရွာသစ်ရွ ာတွင် ယနေ့ နံနက် (၁၁) နာရီကျော် တွင် KNU တပ်မဟာ(၆) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော် တို့အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ သည် ဟု […]
“NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်သွားပြီ”ဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဌသစ် ဦးသိန်းစိုး ပြော
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ပယ်ပျက် သွားပြီဟု စစ်ကောင်စီက ခန့်အပ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌသစ် ဦးသိန်းစိုးက ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ယနေ့ […]
တိုင်းပြည် မငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးငယ်လေးတွေ နေ့တိုင်းနီးပါး စွန့်ပစ်ခံနေရကြောင်း ခိုင်နှင်းဝေ ပြော
ပရဟိတအလုပ်တွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသူ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သာမကပဲ ပရဟိတသမားကောင်း တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက အခုလို တိုင်းရေးပြည်ရေးမငြိမ် မသက်ဖြစ်နေစဉ်အချိန်မှာကို နေ့တိုင်းနီးပါး ကလေးငယ်လေးတွေ စွန့်ပစ်ခံနေရကြောင်းပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “ဒီ မနက် အစောကြီး တိုက်ကြီးမြို့နယ် အဖျောက် […]
ဗေဒင်ဆရာလေး “လင်းညှို့တာရာ”ရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်း
၂၅.၂.၂၀၂၁ (ယမန်နေ့) တွင် ဗေဒင်ဆရာလင်းညိူ့တာရာ ၏ ဒုတိယရုံးချိန်းအဖြစ် တောင်ဥက္ကလာတရားရုံးသို့သွားခဲ့ပါသည်။ နေ့ခင်း၂နာရီလောက်မှာတောင်ဥက္ကလာ မြို့နယ်တရားသူကြီးနှင့်တွေ့ခွင့်ရပြီး တရားသူကြီးမှ – စွပ်စွဲခံရသူ ကို၁၆.၂.၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် video conferenceဖြင့်သာရုံးထုတ် တွေ့ဆုံ ချုပ်ရက် ပေးခဲ့ပြီး တရားရုံးသို့ ရုံးထုတ်လာခဲ့ခြင်း‌တော့မရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ […]
၂၁ ရက်နေ့ကတည်းက ဘူးလက်လှဆွေ အာမခံနဲ့ပြန်လွတ်
By adminwipPosted on February 24, 2021
နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ ၁၂၄(က) နဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ ဘူးလက်လှဆွေလို့ခေါ်တဲ့ ဦးလှဆွေဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၁)ရက်နေ့ ကတည်းက အာမခံနဲ့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ အမျိုးသားရေးသမားတွေဆီက သိရပါတယ်။ ဦးဝီရသူလည်း နောက်လဆန်းထဲ ပြန်လွတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ “သူပြန်လွတ်လာတာဟုတ်ပါတယ်။ သတင်းမှာဖော်ပြရလောက်တဲ့အထိတော့ အကျယ်တဝင့် ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။”လို့ အမျိုးသားရေးသမားရှေ့နေတစ်ယောက်က […]
The author and local publisher Testing t…
တရုတ်နိုင်ငံဟာ ဂျပန်နိုင်ငံသားများ ကို C…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ဆက…
အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော တောင်တရုတ်ပင်လ…
ကော့ကရိတ် တွင် ကေအမ်မ်ယူ နှင့် တပ်မတော် …
“NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ၂၀၂၀ …
တိုင်းပြည် မငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးငယ်…
၂၁ ရက်နေ့ကတည်းက ဘူးလက်လှဆွေ အာမခံနဲ့ပြန်…
Copyright © 2020. Created by World info Post. Power by Rangoon Times